Windows 10 သည် Samsung Galaxy S8 နှင့်အခြား Android များတွင်အသုံးပြုထားသည် Androidsis
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကအလုပ်လုပ်မြင်ကြပြီ ARM အတွက် Windows 10 ကို Samsung Galaxy S8 တွင်အသုံးပြုထားသည် Snapdragon 835 ချစ်ပ်ပါသောအခြား Android terminal များနှင့်သူတို့၏အူလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ
ယခုကြည့်ပြီးပြီ၊ Windows 10 တွင် memory နှင့်ပတ်သက်သော bug ကိုပြင်ဆင်သည် ARM အတွက်နှင့် Snapdragon 835 ချစ်ပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ၊ မိုက်ခရိုဆော့၏ operating system ကိုဒီချစ်ပ်ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းများမှာတပ်ဆင်နိုင်တယ်။
Developer များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာသည် Samsung Galaxy S8 နှင့်အတူတူပင် chip နှင့်အတူအခြား terminal များတွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိရန်အားပေးခဲ့သည်။ ငါတို့ပြောတယ် Xiaomi Mi6၊ Xiaomi Mi MIX 2S နှင့် OnePlus 6.
- Evsio0n (@ boby2001820) ဧပြီလ 13, 2020
ဒါ့အပြင် Windows 10 ကို Android ဖုန်းတွေမှာ install လုပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ပေမယ့်၊ ယခုအချိန်တွင် utility ကို nil ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အရေးကြီးသည်မှာယခုမှ စ၍ ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်၎င်းတို့ကို developer များစွာမှအမြတ်ထုတ်ရန်စွမ်းရည်များဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်လုံးဝအသုံးမ ၀ င်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် touch screen သို့မဟုတ်ကင်မရာကိုယ်နှိုက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ Windows 10 ကို Galaxy S8 တွင်တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သော developer များစောင့်ဆိုင်းရပါမည် installation လမ်းညွှန်ကိုမျှဝေပါ နှင့်များစွာသောအခြားသူများသည်သူတို့၏အက်ပ်များ၊
အဘယ်အရာကိုတစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Windows 10 ကို Samsung Galaxy S8 တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည် ARM နှင့် Android အတွက် Windows 10 dual boot ကိုတွေ့နိုင်သည်။ မကြာခင်မှာသူတို့ဘာကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Windows နဲ့ Android အကြားချိတ်ဆက်မှုပိုနီးကပ်လာပြီဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ Windows 10 နှင့် Samsung DeX သုံးစွဲသူများအားပြောပြပါ သင်၏ Samsung ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ယခုအခါ Windows 10 သည် Samsung Galaxy S8 နှင့်အခြား Android များတွင်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်
Kirin 985: အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော 5G ပရိုဆက်ဆာအသစ်